I-China i-Pvc camera camera welding mesh rolls yomzi mveliso kunye nezolimo umenzi wesicelo kunye noMthengisi | Pro kocingo
PVC camera umnatha wocingo lwenziwe ngocingo lwentsimbi ngenkqubo ezenzekelayo kunye nobuchule bokuwelda obuphucukileyo. Kubekwe ngokuthe tye nangokuthe nkqo ukwenza ubume besikwere esomeleleyo. Ke ukufakwa kwi-PVC yokugquma. IPHEPHA LOKUGQIBELA linokubonelela ngazo zonke iintlobo zombala hayi kuluhlaza kuphela. Kananjalo unokuyijija ngombala we-zinc ngaphambi kokuba i-PVC isongelwe ukunciphisa ukubola phantsi kweemeko zemozulu ezifumileyo. Ukufakelwa kwe-PVC camera wire mesh kulula kwaye kulula ukugqiba ukufuna kuphela ukudinwa umnatha kunye nokuthumela ngocingo emva kokutyhala iposti emhlabeni. Umnatha wocingo we-PVC uphantsi ngokwexabiso, ukomelela, ukumelana nokubola, kwaye uneepropathi zokwambathisa ezilungileyo.
PVC wawutyabeka wocingo isetyenziswa kakhulu kushishino nakwezolimo intsimi, ukuthuthwa kunye nokumbiwa kwemigodi kuzo zonke iinjongo ezinjengezindlu zeenkuku, iindawo ezibaleka imijelo yeenqwelo moya, indawo yokufunxa, iscreen sokumisa iziqhamo, ucingo.
Ubungakanani becingo: 2.0-3.0mm
Enemingxuma :: 60 * 60, 50 * 50 50 * 100,100 * 100mm
Ubude: 30m kuluhlu / 50m kuluhlu
Kugqityiwe: PVC wawutyabeka (Mnyama, Luhlaza, Mthubi)
1) Ixabiso elifanelekileyo
Indlela yokwenza i-PVC camera umnatha wocingo kunye nendlela yokuyifaka igqibe ukuba iindleko zayo zisezantsi kunezinye i-weld wire mesh.
2) nokumelana enganyangekiyo
Wocingo kwalenza kunye umgubo wawutyabeka ukwenza lenjongo ukunciphisa umhlwa kunye umhlwa ekusetyenzisweni kwaye ihlale ixesha elide.
3) Hlangana ngokulula
Ulwakhiwo ngokulula kubandakanya ipaneli enemingxunya, iposti enye yento inokwenza ukuba ihlanganiswe ngokukhawuleza kwaye akukho sidingo sazo naziphi na izakhono.
Into NO.: PRO-06 Ixesha Lead: 15-21 DAYS Imveliso Orgin: CHINA
Egqithileyo M-ezimilise Isefu welding enemingxuma Fence (Enye-sifuba Post) kwifama elanga
Okulandelayo: Itreyini esindayo yomthwalo onzima wokuhambisa izinto kunye nokuzigcina (4 Amacala)